Ogaden News Agency (ONA) – Daggaaladi u danbeeyay ee dhaxmara Ciidanka ONLF iyo kuwa gumeysiga
Daggaaladi u danbeeyay ee dhaxmara Ciidanka ONLF iyo kuwa gumeysiga
Posted by ONA Admin	/ July 18, 2013
Daggaalo Lagu Jabiyay Ciidamada Gumeysiga Ethiopia oo ka dhacay gudaha Ogadeniya. Daggaaladaas ayaa waxa lagu beegsaday gaadiid ay lahaayeen ciidamada gumeysiga sidoo kale waxaa daggaalo lagu qaaday askarta Woyanaha ee moralkoodi dhamaaday la gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh. Dagaaladan ayaa dhacay intii u dhaxeysay 13/07/2013 illaa16/06/2013.
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka ogadeniya gaar ahaan xarunta dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ay CWXO kuqaadeen ciidanka gumaysiga Itoobiya oo lagu jabiyay ciidanka wayaanaha dagaalaasu waxay ukaladhaceen sidan.
13/7/13 Burguduud oo dagmada Xamaro katirsan waxaa kamiin kaxidhay ciidanka cwxo waxayna halkaas kugubeen 1 baabuur oo halkaa kubasbeelay baabuurkii sidoo kala waxay dabsaareen kolonyo lasocotay gaadhigaas waxayna halkas kudileen 16 askari.
13/7/13 Gasaangas oo Xamaro udhaw waxaa ciidamka wayaanaha lagaga dilay 3 askari 4 kalana waa lagadhaawacay.
12/7/13 Jeedalo oo dagmada sagag katirsan kamiin ay CWXO Kamiin ay kaxidhen waxay kugubeen 1 baabuur oo ay ciidamada cadawgu wateen waxayna sidookale dabsaareen kolanyadii kale waxayna kudileen 10 askari 7 kalana way kadhaawaceen.
11/7/13 Daacilaale oo dagmada Shilaabo katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagugaadhsiiyay khasaare laxaad leh.
8/7/13 Hareerikaladhacay oo dagmada Wardheer ee xarunta gobolka doollo katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dhaawacay 1 askari.
6/7/13 Xabaska oo Fiiq udhaw dagaal kudhaxmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhaxmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 3 kalana waa lagadhaawacay.
6/7/13 Farmadow oo dagmada Shaygoosh katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari tiro kalana waa laga dhaawacay.
4/7/13 Xatu oo dagmada fiiq katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 3 askari 2 kalana waa lagadhaawacay.
1/7/13 Leedilay oo dagmada Dhagaxbuur katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga loogugaystay khasaare aan faahfaahintiisa ONA soo gaadhin.
16/6/13 Alaalaleey oo dgamada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar katirsan waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo aan faahfaahintiisa ONA soo gaadhin.